लक्षण हेरेर थाहा पाउनुहोस्, कस्ता नारी सौभाग्यशाली ? | सुदुरपश्चिम खबर
– नारी ईश्वरको अद्वितिय, सुन्दर र रहस्यमयी रचना हो । भनिन्छ, नारीलाई बुझ्न असंभव छ । के भनाई छ भने, भगवानले समेत नारीलाई बुझ्न सक्दैनन् । अर्थात नारी रहस्य हुन् । जहाँ रहस्या हुन्छ, त्यहाँ बढी उत्सुकता हुन्छ । आकर्षण हुन्छ । यही कारण हो कि, नारीले सधै पुरुषलाई आफुतिर आकषिर्त गरेर राखेको छ । भनिन्छ, नारीलाई बुझ्नु, उनको मन पढ्नु, उनको भावभंगीमा जान्न त्यती सहज छैन ।
नारीको आकर्षण- यही रहस्यमय स्वरुपको कारण नारीको आकर्षण सृष्टिको प्रारम्भदेखि अहिलेसम्म लगातार कायम छ । प्राकृतिक आकर्षण र विवाह जस्ता संस्कारलाई सफल र संभव बनाउनका लागि नारीलाई बुझ्नैपर्ने अवस्था पनि छ । शरीर विज्ञानले नारीमाथि गरेको लामो शोधपछि केही यस्ता लक्षण थाहा भयो, जसले नारीको बारेमा केही हदसम्म जान्न सकिन्छ ।
नारीको नाक यदि छ -शरीर विज्ञान अनुसार सानो मुख भएको नारी पुरुषका लागि शुभ मानिन्छ । यद्यपी ध्यान दिनुपर्ने चाहि के भने, धेरै सानो मुख भएको नारी पनि त्यती ठिक हुन्न । -नारीको नाक यदि सानो छ भने उनीहरु कामकाजी हुन्छन् । नाकको अगिल्लो हिस्सा लामो छ भने यस्ता नारीले जीवनभर रानीको समान सुखभोग गर्छिन् । जुन नारीको गर्दन सुन्दर, सुडौल छ, उनीहरु श्रेष्ठ मानिन्छ । सुन्दर गला एवं गर्दन श्रेष्ठताको सूचक हो ।
गोलो र गुलाबी ओंठ -जुन नारीको ओंठको बिचमा रेखा देखिन्छ, उनी सौभाग्यशाली हुन्छन् । नरम, गुलाबी र गोलाकार ओंठ भएकी नारीले श्रीमान्लाई सुख दिन्छन् । -नारीको दाँत मिलेको, मझौला र सफा छ भने राम्रो मानिन्छ । जुन नारीको दाँत गाईको दुध जस्तै सेतो हुन्छ, उनीहरु श्रीमानका अत्यान्त पि्रय हुन्छन् ।
-जुन नारीको जिब्रो पातलो, रातो र कोमल हुन्छ, उनले श्रेष्ठ श्रीमान पाउँछन् र जीवन सौभाग्यले भरपुर हुन्छ । -मृगको जस्तो आँखा भएकी नारी श्रीमान्का लागि शुभ मानिन्छ । -जुन नारीको औंला कोमल र आपसमा जोडिएको हुन्छ, उनीहरु परम सौभाग्यशाली हुन्छन् । यसको विपरित यदि कुनै नारीको खुट्टाको औंला आपसमा मिलेका छैनन् भने उनीहरुले धन संचित गर्न सक्दैनन् ।
नारीलाई कसरी बुझ्ने ? उल्लेखित लक्षण एवं संकेत पनि आफैमा पूर्ण भने छैनन् । किनभने कहिले काहीँ उनीहरुको शारीरिक बनौट र स्वभाव आपसमा नमिलेको पनि पाइन्छ ।